Ahoana ny fahafantarana ny haavon'ny batterin'ny AirPods anao amin'ny Apple Watch | Avy amin'ny mac aho
Ahoana ny fahafantarana ny haavon'ny batterin'ny AirPods anao amin'ny Apple Watch
Andro iray hafa dia hiresaka momba ny vokatra vaovao avy amin'ny Cupertino isika, ny AirPods mahafinaritra. Voalohany indrindra, tianay ny hampazava tsara fa rehefa miresaka momba ireo headphone Apple vaovao ireo dia tsy midika izany fa izy ireo no safidy tsara indrindra eny an-tsena na manana endrika mety amin'ny karazana olona rehetra izy ireo, na dia ho an'ny ny tsiriko dia mifanaraka amin'ny zavatra rehetra angatahiko.
Betsaka ny mpanaraka mitsikera ny fomba ananany, izay tena mitovy amin'ny EarPods, satria tsy mifanaraka amin'ny sofin'ny olona maro izy ireo. Marina fa tsy mety amin'ny karazana mpampiasa rehetra izy io, saingy tsy misy antony tokony hilazana fa tsy safidy tsara izy ireo noho izany antony izany ... Ny Ferrari dia tsy natao ho an'ny rehetra ary noho izany dia tsy fiara ratsy izy ireo ...
Androany ny tianay hazavaina aminao dia ny fomba hijerena ny bateria izay anao AirPods ao amin'ny Apple Watch anao. Araka ny efa fantatrao, AirPods tonga amin'ny tranga izay bateria mamela anao hamerina hividy fotoana farany fampiasana 24 ora. Ny bateria ananan'ny AirPods dia tena kely nefa na dia izany aza, ny fiampangana voalohany voalohany rehefa nesorina tamin'ny tranga dia manome adiny dimy farafaharatsiny.
Eny, mba hahitanao ny batterie navelan'ny AirPods anao dia azonao atao hafa izany miankina amin'ny fitaovana ampiasanao azy ireo. Amin'ny Mac, azonao atao ny mahita ny bateria navelan'izy ireo tamin'ny fipihana fotsiny ny sary masina eo amin'ny bara ambony an'ny Finder Bluetooth> AirPods. Ho hitanao fa misy fihenam-bidy miseho izay Mampiseho anao ny fiampangana an-telefaona tsirairay sy ny tranga anananao.
Na izany aza, raha ny Apple Watch anao fa tsy ny iPhone entinao dia azonao atao ihany koa ny mahita hoe ohatrinona ny vola sisa tavela raha mbola asaivo ampiarahina amin'ilay famantaranandro ireo AirPods. Raha te hampifandray ny headphones amin'ny famantaranandro, ny sisa ataonao dia ny misosika avy any ivelan'ny fiambenana miakatra hatrany ambany mba hampisehoana ny tontonana fanaraha-maso ahafahantsika manery ny kisary handefasana ny audio any amin'ny AirPods.
Rehefa tsindrio ny AirPods dia azontsika atao ny manindry eo amin'ilay efijery teo aloha ilay sarin'ny batterie navelan'ny Apple Watch hampiseho amintsika ny efijery izay ampahafantarina antsika ny batterie tavela tamin'ny telefaona tsirairay. Amin'ny tranga Apple Watch dia tsy mahita afa-tsy ny fiatraikany amin'ny finday fa tsy avy amin'ilay tranga.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » maro » Ahoana ny fahafantarana ny haavon'ny batterin'ny AirPods anao amin'ny Apple Watch
Tranomboky amin'ny sary, Autostart ao amin'ny Macbooks 2016, macOS 10.12.3, Tim Cook Actions, sy maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho
Amin'ny 5 Febroary ny foibe iraisam-pirenen'i iTunes dia any Irlandy